Fahadisoana pejy 9 tsy tokony hialanao | Martech Zone
Fahadisoana pejy 9 tsy tokony hialanao
Talata, Jona 16, 2015 Talata, Jona 30, 2015 Douglas Karr
Ho gaga ianao amin'ny zavatra maro manelingelina olona iray amin'ny pejy iray izay ahatongavany. Kitendry, fitetezana, sary, teboka bala, teny sahisahy… izy rehetra dia misarika ny sain'ny mpitsidika. Na dia tombony iray aza izany rehefa manatsara pejy ianao ary mametraka an-tsokosoko an'ireo singa ireo hanaraka ny mpitsidika, ny fampidirana singa diso na singa ivelany dia mety hampiala ny mpitsidika ny hetsika fiantsoana tadiavinao hikitika azy ireo ary hiova fo.
Copyblogger dia namoaka ity infographic mahafinaritra ity izay miteraka fampitahana eo amin'ny mpitsidika ny tranokalanao sy ny olona manaraka ny lalana, Fitaovana fitaterana pejy 9 mahatonga anao hahavery orinasa. Tena tiako ity fampitahana ity satria mety tokoa rehefa mieritreritra ny dia ataonao ianao.
Ny zavatra voalohany hataonay amin'ny dia dia ny sarintany ny niandohana sy ny toerana halehany, avy eo manome ny làlana mahomby indrindra eo anelanelany. Rehefa ianao mametaka ny pejinao fitobiana, antenaina fa manao zavatra mitovy amin'izany ianao - mieritreritra momba ny fiavian'ireo mpitsidika anao ary tsy mametraka fanontaniana intsony hoe ho aiza ny toerana halehany. Eto dia Lesoka mahazatra 9 azonao atao rehefa mamorona pejy fitobiana (saingy tokony hialana):
Tsy nohazavainao ilay tombony azo amin'ny fiovam-po.
Tsy nanome ianao a lalana tsotra ho an'ny fiovam-po.
Tsy nampiseho mazava a tokan-tena na valiny tokana.
Tsy nanao izany ianao mampita fampahalalana fototra amim-pahombiazana.
Tsy nanao izany ianao esory ny atiny tsy ilaina.
Be loatra ny fampiasanao teknika, ary teny sarotra.
Tsy nanohana ny atiny tamin'ny alàlan'ny angona, antsipiriany ary fijoroana vavolombelona ianao manatsara ny fahatokisana anao.
Tsy nanao izany ianao esory ny safidy ivelany toy ny fivezivezena sy rohy fanampiny.
Tsy azonao antoka ny pejinao entina haingana!
Tags: teny sarotratombony amin'ny fiovam-pocopybloggertoerana halehanyteknika,fampahalalana fototrafandaharana pejy fitateranapejy fidinana goofspejy fandraisana infographiclesoka tamin'ny pejy fipetrahanapejy fanatsarana pejylalana mankany amin'ny fiovam-poatiny manohanafijoroana vavolombelonaatiny be loatra
Fanadihadiana: Ahoana no mampitaha ny famokarana atiny?
Ny fomba hanampian'ny data onboarding amin'ny varotra Multi-Channel